I-NDA nokuvikelwa kwelungelo lokushicilela - iShenzhen Fumax Technology Co, Ltd.
KwaFumax, siyaqonda ukuthi kubalulekile ukugcina ukwakhiwa kwamakhasimende kuyimfihlo. I-Fumax iqinisekisa ukuthi abasebenzi ngeke baveze noma yimiphi imibhalo yokwakha kunoma yibaphi abantu besithathu ngaphandle uma imvume ebhaliwe evela kumakhasimende.
Ekuqaleni kokubambisana, sizosayina i-NDA kuwo wonke amakhasimende. Isampuli ejwayelekile ye-NDA njengoba ingezansi:
ISIVUMELWANO SOKUDALULA ISITOLO SEZIMOTO
Lesi Sivumelwano Sokungazidaluli SeMutual (“Isivumelwano”) senziwa futhi safakwa kule DDMMYY, phakathi naphakathi:
I-Fumax Technology Co., Ltd. i-CHINA Company / Corporation ("XXX"), enendawo yayo eyinhloko yebhizinisi etholakala ku-27-05 #, East block, isikwele i-YiHai, uChuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054,
Ikhasimende Company, enendawo yayo eyinhloko yebhizinisi etholakala ku-1609 av.
okuzothi ngemuva kwalokhu kubhekiswe ngaphansi kwalesi Sivumelwano ngokuthi 'Iphathi' noma 'Amaqembu'. Ukuba semthethweni kwalo mbhalo iminyaka engu-5 kusukela ngosuku lokusayinda.
NJENGOBA, izinhlaka zihlose ukuhlola amathuba okusebenzisana kwezamabhizinisi futhi, maqondana nalokho, zingavezelana ulwazi oluyimfihlo noma lobunikazi.
MANJE, NGAKHO-KE, amaqembu lapha avumelana ngokulandelayo:
ISIQEPHU I - ULWAZI LOKUQALA
Ngezinhloso zalesi Sivumelwano, "Ulwazi Lobunikazi" kuyosho imininingwane ebhaliwe, eyedokhumentari noma yomlomo yanoma yiluphi uhlobo oludalulwe yiQembu kolunye futhi kumakwe yiqembu elidalulayo ngenganekwane, isitembu, ilebula noma okunye ukumaka okukhombisa ubunikazi bayo bokuyimfihlo noma imfihlo , kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, (a) imininingwane yebhizinisi, ukuhlela, ukumaketha noma ubuchwepheshe, (b) amamodeli, amathuluzi, i-hardware kanye nesoftware, kanye (c) nanoma yimiphi imibhalo, imibiko, imemoranda, amanothi, amafayela noma ukuhlaziywa elungiselelwe noma elenzelwe iQembu elitholayo eliqukethe, elifingqa noma elincike kunoma yikuphi kwalokhu okungenhla. “Ulwazi lobunikazi” ngeke lufake imininingwane:
(a) itholakala esidlangalaleni ngaphambi kosuku lwalesi Sivumelwano;
(b) itholakala esidlangalaleni ngemuva kosuku lwalesi Sivumelwano ngaphandle kwesenzo esingalungile seqembu elamukelayo;
(c) unikezwa abanye yiqembu elidalulayo ngaphandle kwemikhawulo efanayo nelungelo labo lokusebenzisa noma lokuveza;
(d) waziwa ngokufanele yiQembu elitholayo ngaphandle kwemingcele yokuphathelene nesikhathi lapho kutholwa leyo mininingwane eqenjini elidalulayo noma laziwa ngokufanelekile yiQembu elitholayo ngaphandle kwemingcele yobunikazi evela komunye umthombo ngaphandle kweqembu elidalulayo;
(e) lakhiwa ngokuzimela yiQembu elitholayo ngabantu ababengenakho ukufinyelela, ngqo noma ngokungaqondile, kuLwazi Lobunikazi; noma
(f) ubophezelekile ukuthi akhiqizwe ngokomyalelo wenkantolo yamandla afanele noma incwadi yokuphatha evumelekile noma yokubizelwa kuhulumeni, inqobo nje uma iqembu elitholayo lazisa iqembu elidalulayo ngokushesha ngalowo mcimbi ukuze iqembu elidalulayo lifune umyalo ofanele wokuzivikela.
Ngenhloso yalokhu kukhishwa okungenhla, ukudalulwa okucacisiwe, isb. Ngezindlela zobunjiniyela nezokuklama namasu, imikhiqizo, isoftware, izinsiza, imingcele yokusebenza, njll. Ngeke kuthathwe njengokuphakathi kwalokhu okukhulunywe ngenhla ngenxa nje yokuthi kwamukelwa ukudalulwa okujwayelekile okusezindaweni zomphakathi noma kukuMamukeli. Ngaphezu kwalokho, noma ikuphi ukuhlanganiswa kwezici ngeke kuthathwe njengokuphakathi kokungenhla ngenxa yokuthi izici ezithile zazo zisendaweni yomphakathi noma ziphethwe Umamukeli, kodwa kuphela uma inhlanganisela uqobo kanye nenqubo yayo yokusebenza kusesidlangalaleni isizinda noma ekuphathweni kweQembu elitholayo.
ISIHLOKO II - UKUYIMFIHLO
(a) Iqembu elitholayo lizovikela lonke ulwazi oludalulwayo lwePhathi njengemininingwane eyimfihlo neyomnikazi futhi, ngaphandle kwemvume ebhaliwe yeQembu elidalulayo noma njengoba kuhlinzekelwe ngenye indlela lapha, ngeke lidalule, likopishe noma lisabalalise lolo lwazi lobunikazi ku noma yimuphi omunye umuntu, inkampani noma ibhizinisi isikhathi esiyiminyaka emihlanu (5) kusukela ngosuku lokudalulwa.
(b) Ngaphandle kokuthi maqondana nanoma yimuphi umsebenzi ohlanganyelwe phakathi kwamaqembu, iqembu elitholayo ngeke lisebenzise noma yiluphi ulwazi loMbuso Oludalulwayo Lwezimpahla ukuze lusizakale noma lusizakale nganoma yimuphi omunye umuntu, inkampani noma ibhizinisi; ngokuqiniseka okukhulu, ukufayilwa kwesicelo selungelo lobunikazi ngaphansi kwemithetho yanoma yiliphi iqembu ngamaqembu atholayo asuselwa, ngqo noma ngokungaqondile, kulwazi lwePhathi lwePropathiyeti oludalulwayo kuzokwenqatshelwa ngokuphelele, futhi uma ngabe lokho kufakwa kwelungelo lobunikazi noma ukubhaliswa kwelungelo lobunikazi kwenzeka ngokweqa kulesi sivumelwano, wonke amalungelo amaqembu atholayo ngokufakwa kwesicelo se-patent noma ukubhaliswa kwelungelo lobunikazi kuzodluliselwa ngokuphelele eqenjini elidalulayo, ngaphandle kwenkokhiso kwalokhu okulandelayo, futhi ngaphezu kwanoma iyiphi enye indlela yokulinyazwa.
(c) Iqembu elitholayo aliyikudalula konke noma ingxenye yolwazi lwePhathi oludalula noma yiluphi uhlangothi kumanxusa, amanxusa, izikhulu, abaqondisi, abasebenzi noma abamele (ngokuhlanganyela, “Abamele”) beqembu elitholayo ngaphandle kwesidingo- bazi isisekelo. Iqembu elitholayo liyavuma ukwazisa noma yibaphi Abameleli Balo abathola Ulwazi Lokudalulwa Kweqembu ngokudalulwa okuyimfihlo nokuphathelene nalo kanye nezibopho zalowo Omelene maqondana nokugcinwa kwalolo Lwazi Lobunikazi ngokuhambisana nemibandela yalesi Sivumelwano.
(d) Iqembu elitholayo lizosebenzisa izinga elifanayo lokunakekela ukuvikela imfihlo yoLwazi Lobunikazi oludalulwe kulo njengoba lisebenzisa ukuvikela Ulwazi lwalo Lobunikazi, kepha kuzo zonke izehlakalo lizosebenzisa okungenani ukunakekelwa okulingene. Iqembu ngalinye limele ukuthi lelo zinga lokunakekelwa linikeza ukuvikelwa okwanele kwemininingwane yalo yokuphathelene.
(e) Iqembu elitholayo lizokweluleka ngokushesha iqembu elidalulayo ngokubhala nganoma yikuphi ukusetshenziswa budedengu noma ukusetshenziswa kabi komuntu yinoma yimuphi umuntu mayelana nolwazi oludalulwayo lwePhathi Lobunikazi Iqembu elitholayo elaziyo ngalo.
(f) Noma yimiphi imibhalo noma okokusebenza okuhlinzekwe yiqembu elidalulayo noma kwalo, kanye nayo yonke eminye imininingwane ye-Proprietary nganoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi amadokhumende, imibiko, imemoranda, amanothi, amafayela noma ukuhlaziywa okuhlelwe yiqembu elitholayo noma kufaka phakathi wonke amakhophi alokho okusetshenziswayo, kuzobuyiselwa ngokushesha eqenjini elitholayo eqenjini elidalulayo ngesicelo esibhaliwe seqembu elidalulayo nganoma yisiphi isizathu.
ISIHLOKO III - AYIKHO AMALAYISENISI, IZIQINISEKISO NOMA AMALUNGELO
Ayikho ilayisense leqembu elitholayo ngaphansi kwanoma yiziphi izimfihlo zokuhweba noma amalungelo obunikazi anikezwa noma ashiwo ngokudlulisa imininingwane yobunikazi noma eminye imininingwane kulelo Qembu, futhi alukho ulwazi oludlulisiwe noma olushintshiwe oluyoba yinoma yikuphi ukumelwa, iwaranti, isiqinisekiso, isiqinisekiso noma ukunxenxa maqondana ukwephulwa kwamalungelo obunikazi noma amanye amalungelo abanye. Ngaphezu kwalokho, ukudalulwa kolwazi lobunikazi yiqembu elidalulayo ngeke kuhlanganise noma kufake noma isiphi isethulo noma iwaranti ngokunemba noma ukuphelela kwalolo lwazi.
ISIQEPHU IV - ISILUNGISELELO SOKWEPHULA
Iqembu ngalinye elitholayo liyavuma ukuthi Ulwazi Lobunikazi beqembu elidalulayo lumaphakathi nebhizinisi leqembu elidalulayo futhi lwakhiwa yiQembu elidalulayo noma ngezindleko ezinkulu. Iqembu ngalinye elitholayo liphinda livume ukuthi ukulimala ngeke kube yikhambi elanele lokwephulwa kwalesi Sivumelwano yiqembu elamukelayo noma Abamele balo nokuthi iqembu elidalulayo lingathola ukukhululeka okulingene noma okunye ukulingana ukulungisa noma ukuvimbela noma yikuphi ukwephulwa noma ukwephulwa okusongelwe kwalesi Sivumelwano yiQembu elamukelayo noma yinoma yiliphi labamele lalo. Ikhambi elinjalo ngeke lithathwe njengeliyikhambi elikhethekile lakunoma yikuphi ukwephulwa kwalesi Sivumelwano, kodwa lizoba ngaphezu kwazo zonke ezinye izixazululo ezitholakala ngokomthetho noma ngokulingana eqenjini elidalulayo.
ISIQEPHU V - ASIKHO ISICELO
Ngaphandle kwemvume ebhalwe ngaphambilini yelinye iqembu, alikho iqembu, noma omunye wabaMele abafanele, elizocela noma lenze ukuthi licelwe ukuqashwa noma yimuphi umsebenzi welinye iqembu isikhathi esiyiminyaka emihlanu (5) kusukela ngalolo suku. Ngokwezinhloso zalesi sigaba, ukunxenxa ngeke kufake phakathi ukunxenxa abasebenzi lapho lokho kucela kwenzeka kuphela ngokukhangisa ezikhathini zokusakazwa okuvamile noma inkampani yokusesha abasebenzi egameni leqembu noma Abamele bayo, inqobo nje uma iqembu noma Abamele balo bengazange uqondise noma ukhuthaze leyo femu yokusesha ukuthi icele isisebenzi esinegama elithile noma elinye iqembu.
ISIQEPHU VII - OKUXHUMANEKILE
(a) Lesi Sivumelwano siqukethe konke ukuqonda phakathi kwamaQembu futhi sithatha konke ukuqonda okubhalwe phansi nangokomlomo kwangaphambili okuphathelene nodaba olukhona. Lesi Sivumelwano asinakushintshwa ngaphandle kwesivumelwano esibhaliwe esisayinwe yiwo womabili amaqembu.
(b) Ukwakhiwa, ukuhunyushwa nokusebenza kwalesi Sivumelwano, kanye nobudlelwano bezomthetho bamaqembu avele ngezansi, kuzolawulwa futhi kuthathwe ngokuya ngemithetho yaseCanada, ngaphandle kokubheka ukukhetha noma ukungqubuzana kwemibandela yomthetho .
(c) Kuyaqondakala futhi kwavunyelwana ukuthi akukho ukwehluleka noma ukubambezeleka kweqembu ekusebenziseni noma yiliphi ilungelo, amandla noma ilungelo elingezansi elizosebenza njengokuyekelwa kwalo, futhi noma ikuphi ukusetshenziswa okukodwa noma okuyingxenye kwalokhu ngeke kuvimbele okunye noma okunye ukusetshenziswa kwalo, noma ukusetshenziswa kwanoma yiliphi elinye ilungelo, amandla noma ilungelo ngezansi. Akukho ukuyekelwa kwanoma yimiphi imigomo noma imibandela yalesi Sivumelwano okuzothathwa njengokuyekelela noma yikuphi ukwephulwa okulandelayo kwanoma isiphi isikhathi noma umbandela. Konke ukuyekelwa kufanele kubhalwe phansi futhi kusayinwe iqembu elifuna ukuboshwa.
(d) Uma noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano izobanjwa ingaphoqelelwa, okusele kwalesi Sivumelwano noma kunjalo kuzohlala kusebenza ngokuphelele.
(e) Ukudalulwa Kwemininingwane Yobunikazi engezansi ngeke kuthathwe njengokuphoqelela noma yiliphi Iqembu (i) ukuthi lingene kunoma yisiphi esinye isivumelwano noma ukuxoxisana noma lenze okunye ukudalulwa kolunye uhlangothi ngalokhu, (ii) ukuyeka ukungena noma yisiphi isivumelwano noma ukuxoxisana nanoma yimuphi umuntu wesithathu maqondana nodaba olufanayo noma olunye udaba, noma (iii) ukuyeka ukuqhuba ibhizinisi lalo nganoma iyiphi indlela elikhetha ngayo; kodwa, kepha, maqondana nokulandela imizamo ngaphansi kwezigatshana (ii) no (iii), iqembu elitholayo aliphuli noma yiziphi izinhlinzeko zalesi Sivumelwano.
(f) Ngaphandle kokuthi umthetho ufune ngenye indlela, akukho simemezelo esidlangalaleni esingenziwa yiQembu maqondana nalesi Sivumelwano noma izingxoxo ezihlobene ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yelinye iqembu.
(g) Izinhlinzeko zalesi Sivumelwano zenzelwe ukusiza amaPartyini alapha nabalandeli bawo abavunyelwe futhi babela, futhi akekho umuntu wesithathu ongafuna ukuphoqelela, noma ozozuza kulezi zinhlinzeko.
NGOBUFAKAZI BOKUTHI, izinhlaka lapha zenze lesi Sivumelwano kusukela ngosuku lokuqala olubhalwe ngenhla.